Real Madrid Oo Go’aan Ka Gaartay Sida Ay Ugu Dabaaldegi Doonto Hanashada Horyaalka La Liga Habeenka Khamiista - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Real Madrid Oo Go’aan Ka Gaartay Sida Ay Ugu Dabaaldegi Doonto Hanashada...
Haddii Real Madrid ay ku guuleysato horyaalka La Liga habeenka Khamiista, maamulka caasimada Spain ayaa durbaba ka sii fekerayo sida ay u maareyn lahaayeen dabaaldegyada iyadoo cabsida Korona Fayras ay weli taagan tahay.
Caadiyan taageerayaasha Real Madrid waxay isagu soo baxaan goobta lagu magacaabo ee Cibeles Fountain si ay ugu dabaaldegaan koobabkooda, iyadoo ciyaartoyda xitaa ay ka qeyb qaataan dabaaldega.
Si kastaba, madaxada kooxda Real Madrid ayaa doonaya inay ka fogaadaan xaalad kasta oo halis gelineysa caafimaadka taageerayaasha sidaasi darteed sannadkan wax dabaaldeg ah kuma qabsan doonaan Cibeles.
Taas bedelkeeda, dabaaldeg la soo agaasimay ayay waqti danbe ku qaban doonaan garoonka Santaigo Bernabeu marka taageerayaasha loo ogolaado garoomada.
Maamulka dowlada hoose ayaa xitaa ka shaqeynaya inay boliis badan geeyaan goobta u asteysan dabaaldegyada ee magaalada Madrid si aysan taageerayaal badan isagu soo bixin habeenka Khamiis ama habeenka Axada, si looga fogaado sidii ay sameeyeen taageerayaasha kooxda Cadiz markii ay xaqiijisteen u soo bixitaankooda horyaalka La Liga.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galay Shir Madaxeedka IGAD
Next article142 ruux oo laga soo celiyay Sacuudiga oo Muqdisho soo gaaray